UJessica Chastain kwi-Talks to Star kwi 'It: Isahluko sesibini' - iHorror
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo UJessica Chastain kwiNtetho yeNkwenkwezi kwi 'It: Isahluko sesibini'
UJessica Chastain kwiNtetho yeNkwenkwezi kwi 'It: Isahluko sesibini'
by UKelly McNeely Februwari 20, 2018
ibhalwe ngu UKelly McNeely Februwari 20, 2018
Njengoko kunikwe ingxelo Ezahlukahlukeneyo, u-Jessica Chastain otyunjwe u-Oscar izihlandlo ezibini ukwingxoxo zokuba akhokele u-Andy Muschietti : Isahluko sesiBini njengomntu okhulileyo uBeverley Marsh.
Nangona okwangoku kungekho nto ityikityiweyo okanye ibekwe elityeni, oku kuphawula isimemezelo sokuqala (semi) sokubhengezwa kweenguqu zabantu abadala beLungu leLahlekileyo. Imithombo eyahlukeneyo ithi "omabini amacala aqale ngokusemthethweni ukuxoxa [ngeChastain] ukuza kwiprojekthi".
Ubungakanani obunokubakho babalinganiswa abadala ibingumxholo oshushu wencoko phakathi kwabalandeli aboyikisayo ukusukela kwimpumelelo yasendle ye ItUkukhutshwa kokuqala.
Singathanda echazwe ngaphambili ukuba uChastain wayejonge indima kwaye abalandeli babonakala beyixhasa le mbono- zininzi iipowusta ezenziwe ngumlandeli ezazimphose njengoBev. Ukuthathela ingqalelo into yokuba umdlali weqonga onetalente wayesebenze ngaphambili noMuschietti kwi2013's Mama -Iveliswe nguGuillermo Del Toro-iyavakala into yokuba uya kuba ngoyena mntu ulwela phezulu.
Mama ngeeMifanekiso eziManyeneyo
UMuschietti ubuyela ngqo : Isahluko sesiBini Kunye nombhali uGary Dauberman. Xa ingxelo yefilimu ye- It yaqala yaqondwa, le ncwadi yahlengahlengiswa kwiskripthi nguDavid Kajganich. UCary Fukunaga (Umtsalane oyinyaniso Ixesha loku-1, aka lelona xesha libalaseleyo kumabonwakude, ndilwe nam) kamva kwathiwa mababuyekeze baphinde babhale iskripthi ngeChase Palmer. Emva kokuba uFukunaga emkile kwaye iprojekthi yathathwa nguMuschietti, uDauberman waziswa ukuze ancede abhale kwakhona iskripthi esilingana nombono kaMuschietti ukuba yifilimu.
Iskripthi se : Isahluko sesiBini isasebenza kwaye isetwa ukuqala ukufota kweli hlobo.
Kwakhona, asinazo naziphi na iindaba ezisayiniweyo ezisemthethweni zokuphosa (nangona kukhuselekile ukucinga ukuba siza kubona ukubuya kweBhili Skarsgård njengePennywise). Ke ngeli xesha, kuya kufuneka uhlale uthandabuza naziphi na iiposta ozibonayo njengoko zinokwenzeka ukuba zenziwe ngabalandeli.
Njengesiqhelo, kude kuqinisekiswe iinkcukacha, thatha yonke into ngengqolowa yetyuwa.
Ngokuqinisekileyo fan yenziwe
Oko kuthethiweyo, njengoko iindaba zisiza, siya kuqiniseka ukuba sikugcina ngeposi! : Isahluko sesiBini icwangciselwe ukukhutshwa ngo-Septemba 6, 2019.
UAndy MuschiettiIT: Isahluko sesiBiniJessica Chastain
UKelly McNeely kukusela iti, ukwenza ubugcisa, i-machete ephethe i-junkie yesikrini kunye ne-obsession esempilweni eyoyikisayo, iifilimu zentshukumo ezingama-90, kunye nokuhonjiswa kwasekhaya okungafunekiyo. Umbhali wabasebenzi weHorror.com, uye wanegalelo kwiGrim Magazine, i-Modern Horror, i-CGMagazine, iSalem Horror Fest, i-1428 Elm, kunye neNetflix Life. Ungamfumana esenza izinto zasekhaya zomthendeleko kwiCreepy Crafter kuFacebook, okanye umlandele kuTwitter naku-Instagram @kellsmcnells
'Indlu yokuFa' yatyhalelwa umva ngenxa yePhenomenon
Olu suku lweMbali yoyikeka: nge-20 kaFebruwari